linear လျှပ်စစ် actuator နှင့် torque ပွောငျးလဲ ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > linear လျှပ်စစ် Actuator > linear လျှပ်စစ် actuator နှင့် torque ပွောငျးလဲ
linear လျှပ်စစ် actuator နှင့် torque ပွောငျးလဲ
AOX-QL စီးရီး linear လျှပ်စစ် actuaသို့r နှင့် သို့rque ပွောငျးလဲ ဖြစ် သငျ့လျြောသော ဘို့ ပြောင်းလဲပစ် နှင့် Open-နီးစပ် တာဝန် ၏ ထိန်းချုပ်မှု နှင့် ဖြစ်စဉ် နည်းပညာ သို့ ခှဲစိတျကုသ ထိန်းချုပ်မှု valves.AOX ယူ ကြီးမားသော အရေးပါပုံ သို့ ကော်ပိုရိတ် လူမှုရေး တာဝန်။ ကျွန်တော်တို့ ဆက်လက် သို့ ရှာအံ့သောငှါ အခွင့်အလမ်း ဘို့ တိုးတက်မှု, မျှဝေခြင်း နှင့် တိုးတက်ရေး နှင့် ကျွန်တော်တို့၏ မိတ်ဖက် နှင့် cusသို့mers. တွင် ထို့အပြင်, အားလုံး ကျွန်တော်တို့၏ န်ဆောင်မှုများ များမှာ hနှင့်led ဖြတ်. cusသို့mer-centric စီမံခန့်ခွဲမှု, ပေးကမ်းခြင်း အဆိုပါ ကြီးမားသောest ဦးစားပေး သို့ cusသို့mer satဖြစ်faction.
(AOX-QL-20/30/50/80 မှလွဲ. ) 1 torque ပြောင်းလဲမည်
အလိုအလျှောက်ပါဝါလုပ်ကြံသောအားဖြင့်ကုိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဆို့ရှင်နှင့်လျှပ်စစ် actuator ရဲ့ပျက်စီးမှုကိုရှောင်ရှားရန် Overload ကာကွယ်မှုပေး torque switch ကိုအတူ AOX-QL စီးရီး linear လျှပ်စစ် actuator ။
တိကျမှန်ကန်တီကောင်နှင့် Self-သော့ခတ်နှင့်အတူတီကောင်ဂီယာလွှဲပြောင်းကြီးမားတဲ့လိမ်အားထိထိရောက်ရောက်မြင့်မားထိရောက်မှုနိမ့်ဆူညံသံ (max ကို။ 50 dB), ရှည်သောအသက်, တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောဂီယာအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်, ဆီထည့်ရန်မလိုအပ်ပြောင်းပြန်လှန်တားဆီး။
torque switch ကိုအတူ AOX-QL စီးရီး linear လျှပ်စစ် actuator များအတွက်မူလီ shell ကိုမှအလေးထားနှင့် shell ကိုဖယ်ရှားပစ်ကြသောအခါမရချွတ်ရလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့တည်ငြိမ်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရစက်မှုထုတ်ကုန်များ၏ပထမဦးဆုံးလိုအပ်ချက်နှင့်လက်ရာမြောက်သောနည်းပညာအဖြစ်အဆင့်မြင့်ကိရိယာများထုတ်ကုန်များ၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးကိုသေချာဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာ။ AOX အဆင့်မြင့်ကိရိယာများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု torque switch ကိုအတူ AOX-QL စီးရီး linear လျှပ်စစ် actuator ၏အရည်အသွေးကောင်းအာမခံထားသည့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုအပေါ်တင်းကျပ်သောထိန်းချုပ်မှု, ဖွထောကျ။
ပိုကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ AOX-QL စီးရီး torque switch ကိုအတူ linear လျှပ်စစ် actuator ဖော်ပြရန်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏လူကြိုက်များမြှင့်တင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတက်ကြွစွာဂျာမဏီ Valve လောက, AHEMA, ရုရှား PCV ကုန်စည်ပြပွဲ, ECWATCH, မလေးရှားအာရှအတွက်အိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာအဓိကပြပွဲများတွင်ပါဝင် ရေ, ထိုင်း THAIWATER, အင်ဒိုနီးရှား Indowater, ရှန်ဟိုင်း Flowtech, etc.You သမျှသောဤပြပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။
မေး: AOX-QL စီးရီး linear လျှပ်စစ် actuator များအတွက် AOX စျေးနှုန်းသက်တမ်း torque switch သည်နှင့်အတူအဘယ်သို့အလိုရှိသနည်း
မေး: သင်ငါ့ကိုလိမ်အား switch ကိုအတူ AOX-QL စီးရီး linear လျှပ်စစ် actuator အကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်ပေးပို့နိုင်ပါသလား?
hot Tags:: linear လျှပ်စစ် actuator နှင့် torque switch သည်, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်